Amaphupho ngezinyoni izilwane nezinambuzane – iAfrika
Amaphupho ngezinyoni izilwane nezinambuzane
Leli ngelinye lamaphupho amahle kakhulu elingafaniswa nokuphupha amajuba, amadayisi noma idayimane. Leliphupho liyibika lenhlanhla nokuhamba kahle kwezinto empilweni yomuntu. Kafushane nje, singasho sithi likhomba ukuphakama nokudlulela esigabeni esilandelayo kwalokho okwenziwa yilowo ophupha izinkonjane – kungaba ukudlulela esigabeni esilandelayo ngokwemfundo, ukukhushulelwa esikhundleni emsebenzini, ukuwina kakhulu lapho kugembulwa, noma ukwamukelwa kwesicelo ebesifakwe ndawanathile – lezi yizibonelo nje, … Read more
Ukuphupha inyoka emnyama enebala elimhlophe ngenzansi yiphupho elimele abadala noma amadlozi, lisho inhlanhla ezokwenzeka emndenini. Kanti ke uma uphupha ushawa inyoka ensundu kusho ulaka lwabadala phecelezi abaphansi. Amaphupho ngenyoka ensundu. Amaphupho ngenyoka eluhlaza. Amaphupho ngenyoka.
Uma ubona isibankwa kusho ukuthi othile emndenini wakho uzodumaza ukumethemba kwakho.
Tags Izibankwa, Izigcibilisha
Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka sibe ngisho ngaphakathi emndenini wakho. Amaphupho ngenyoka ensundu. Amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe. Amaphupho ngenyoka.
Amaphupho ngeselesele (ixoxo)
Ukuphupha ngexoxo (iselesele) kuyinto engeyinhle, imvamisa leli phupho liba ukuphupha umuzi kababa wakho noma lapho kuzalwa khona ubaba wakho ugcwele amasele. Lokhu kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando.
Tags Amaselesele, Amaxoxo
Uma uphupha ubona amaqhwagi kusho ukuthi izinto onazo njengamanje ngeke zihlale zikhona. Uyozithola ulambile noma umpofu futhi injabulo obucabanga ukuthi unayo iyokulahlekela ngokuhamba kwesikhathi.
Uma uphupha ubona izintwala kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga empilweni ikakhulukazi emsebenzini. Qikelela ukukhokha izikweletu zakho unakekele nempilo yakho.
Uma uphupha ubona izimpukane kusho ukuthi kunabantu abanomona ngawe futhi bangazama ukukubangela inkinga.
Uma uphupha ubona amazeze kusho ukuthi uzobhekana nokudumala ngaphandle uma uphumelela ukuwabulala lokho okusho impumelelo.